SingForYou.net - Amone Khun Arr Pay Thanar Par
Amone Khun Arr Pay Thanar Par
Tags : အမုန်းခွန်အား ပေးသနားတော်မူကြပါ
By : koaungkhaing on May 13, 2010
Score: 92 Rating: 4.60 Comments: 17
Amone Khun Arr Pay Thanar Par's Description
နားထောင်တဲ့သူတော့မသိဘူး..ကျနော်တောင်ဆိုရင်း မျက်ရည်တွေကျချင်လာတယ်ဗျာ.. မူရင်းက ကိုတင်လှိုင်ပါ.. အရင်ဆုံး ဦးဦးဖျားဖျား အချိန်ပေးပြီး ကြယ်တစ်ပွင့်ပေးခဲ့သူကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
u4GyI on May 14, 2010 0
Bro KAK Gyi..Amone Khun Arr ma shi dal..de thi chin lay ko listen yin.. yay ya lel lel Feel ing fyit twar ner del byar..:(..*****:FEEL: :(..:(
pp01 on May 14, 2010 0
ဦးဦးဖျားဖျားအချိန်ပေးပြီးကြယ်တစ်ပွင့်ပေးခဲ့သူကိုလဲမေတ္တာထား နိုင်ရင် ခံတီစ ခံတီဆိုတဲ့ ..သည်းခံခြင်းတရားရမယ်..ဲမေတ္တာထား ပေါ့ ဦးအောင်ခိုင်ရယ် ~~ဒီသီချင်းလေးလိုလေ~မေတ္တာဓတ်နဲ့ဗုတ္ထာမြတ်စွာဆောင်နှင်းခဲ့အောင်ချင်းရှစ်ပါးပါ~~~BTW.BRILLIANT SINGING::D*****
greenlay on May 15, 2010 0
ဓမ္မကထိက မပီပီ ဖြစ်တော့သကိုး ...... :)
turikimuriki on May 14, 2010 0
really nice par shint ... 5***** :-)
greenlay on May 14, 2010 0
အခုမှပဲအားလို့ နားဆင်အားပေးတာ နောက်ကျသွားတယ်အကိုကြီးရေ ***** အဆိုကောင်းတော့ မျက်ရည်တောင်လည်ချင်မိတယ် :)
Thanzinchitthu on May 14, 2010 0
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ...သီချင်းလေးကိုနားထောင်ရတာ...လွမ်းသလို ဆွေးသလိုခံစားမိပါတယ်...အလွမ်းဓာတ်ခံရှိလို့ဖြစ်မယ်....:P.... ဒီသီချင်လေးလည်းဆိုထားတာ ရှယ်ပဲ....5*************
zaw-khaing on May 14, 2010 0
achitsonethu on May 14, 2010 0
so htar tar ayan kg par tal shint ar pay nar sin twar par tal nor;Clapzzz ************))4 u na~~~!!!
very nice par Ko Aung Khaing yay.. အကောင်းဆုံးဆို ဘယ်ဘက်က စပေးရတယ်လို့ ထင်နေပုံရတယ်.. a..so paing pone ka tawt yet2 sat2 pae'
good par del shint bro yay 5***********************
realli nice...............narr htaung yinn ngo chin lar lo ngo twar par tal chint.......hint ......hint.................**********
အဲဒီ ကြယ်တစ်ပွင့်လိုက်လိုက်ပေးနေတဲ့သူကို နားလည်ပေးလိုက်ပါ...သူက တကယ်တော့ အကောင်းဆုံးဆို ဘယ်ဘက်က စပေးရတယ်လို့ ထင်နေပုံရတယ်... ကျွန်တော်တို့လို မပါးနပ်သေးလို့ပါ.... ညာဘက် အစွန်ဆုံးကနေ ပေးခဲ့ပြီ... အမြဲတမ်း ပရိသတ်... :)
susannyunn on May 14, 2010 0
မုန်းဖို့တောင်ခွန်အားတေမချိတော့ပူးလား ???? အဂျစ်ကြီးတဲ့ ဦးဦးအန်ကယ်ဂျီးရေ ....နားထောင်ရင်းနဲ့ ငိုတောင်ငိုကျင်လာတယ်ချင့် အဟင့် :((((( *************************************************************************>>>
sithunaung on May 14, 2010 0
chitmoe2009 on May 14, 2010 0
nar htaung ya tar kg lite tar shin...star lay tway htar kae par tal...5*********
maung309 on May 14, 2010 0
very nice par Ko Aung Khaing yay.... *************
brownlay on May 14, 2010 0
Aso paing tae. KAK atwet ************s tway nae. arr pay khae. par tal.. very nice par!